Disability Rights Ohio - TAKOORKA GURIYEYNTA: Halka Laga Helo Caawimaad
TAKOORKA GURIYEYNTA: Halka Laga Helo Caawimaad
Haddii aad u maleyso in mulkiilaha, ururka guryaha is-kaashatada ama bixiyeyaasha kale ee guriyeynta ay kuu takooreen sababo la xiriira naafanimadaada, waxaa jira laba hay’adood oo aad la xiriiri karto si aad u gudbiso cabasho. Cabashada loo gudbiyo labada hay’adood midkood waxaa lagu magacaabaa eedeyn. Uma baahnid inaad eedeyn u gudbisid labada hay’adood. Haddii aad u gudbiso hay’adaha midkood, bixiyahaaga guriyeynta wuxuu heli doonaa nuqul ka mid ah eedeynta waxaana la weydiin doonaa inay jawaab ka bixiyaan.
Dacwadaha waxaa lagu xereyn karaa labo sanno gudahooda sida ku cad sharciga federaalka ama hal sano msida waafaqsan sharciga Ohio. Waa inaad tixgelisaa inaad la shaqeyso qareenka sababtoo ah way adkaan kartaa inaad dacwad gasho kaligaa. Looma baahna inaad buuxiso foomka eedeynta OCRC ama HUD ka hor inta aadan dacwad gudbinin.
Haddii aad rabto inaad la tashato qareen ku takhasusay takoorka bixiyahaaga guriyeynta, waxaad isku dayi kartaa inaad hesho qareen ama ururka qareenada guud ee adeegga gudbinta adigoo kala xiriiraya Ururka Qareenada Guud ee Gobolka Ohio lambarka bilaash ah 800-282-6556.